मंसिर १ गतेदेखि २९ गतेसम्म राशिअनुसार तपाइको भाग्यरेखा जान्न चाहानुहुन्छ ? - Muldhar Post
मंसिर १ गतेदेखि २९ गतेसम्म राशिअनुसार तपाइको भाग्यरेखा जान्न चाहानुहुन्छ ?
कृष्णप्रसाद काेर्इराला २०७४, १ मंसिर शुक्रबार 4187 पटक हेरिएको
मंसिर (मार्गशीर्ष) महिनाको सङ्क्रान्ति शुक्रबार परेको छ र सूर्यको राशि सङ्क्रमणको समयमा कन्या लग्न रहेको छ । समग्र ग्रह परिवेश यस्तो रहने छ – सूर्यले मंसिर (मार्गशीर्ष) महिनाभरि बृश्चिक राशिमा विचरण गर्ने गर्दछन् । यस महिनाको प्रारम्भमा कन्या राशिमा रहेको मङ्गल ग्रहले १५ गते तुला राशिमा प्रवेश गर्नेछन् । सुरुमा बृश्चिक राशिमा रहेको बुध ग्रहले महिनाभरि बृश्चिक राशिमा नै उपस्थिति जनाउने सङ्केत छ, तर यसबीच ११ गतेदेखि बक्र गतिमा प्रवेश गर्ने बुध ग्रह १५ गते पश्चिम दिशामा अस्ताउने देखिन्छ । शुक्र ग्रहले राशि परिवर्तन गरी यस महिनाको ०९ गते बृश्चिक राशिमा प्रवेश गर्नेछन् ।
सङ्क्रान्तिकै दिन शनिश्चर ग्रहले राशि परिवर्तन गरी धनु राशिमा प्रवेश गर्नेछन्, जसका कारण तुला राशिको साढेसाती समाप्त हुने देखिन्छ भने मकर राशिलाई साढेसाती दशा प्रारम्भ हुनेछ, अब बृश्चिक राशिमा अन्त्य साढेसाती, धनु राशिमा मध्य साढेसाती र मकर राशिमा आद्य साढेसातीको शनि दशा कायम हुनेछ । त्यस्तै मेष र सिंह राशिमा रहेको अढैया दशा समाप्त भई बृष र कन्या राशिलाई अढैया महादशा प्रारम्भ हुनेछ ।
यसबीच दस गतेपछि शनिश्चर ग्रह पनि पश्चिम दिशामा अस्त रहने छन् । अन्य ग्रहहरू बृहस्पति, राहु र केतु ग्रहले गत महिना झैं यस महिनामा पनि क्रमशः तुला, कर्कट र मकर राशिमा उपस्थिति जनाउने छन् । यस्तो ग्रह परिवेशलाई विश्लेषण गर्दा यो महिना आम जनजीवनको दिनचर्या सकारात्मक रहने देखिन्छ । जनताहरू खुसी र प्रसन्न रहने छन्, धार्मिक र आध्यात्मिक गतिविधिमा बृद्धि हुनेछ । खाद्यान्नको मूल्यमा गिरावट आउने छ, तर सुन, दाल र फलफूलजस्ता पहेंला पदार्थको मूल्य आकासिने छ । आकाशमा मेघबादलको योग छ, कतैकतै बेमौसमको वर्षाका कारण सर्दी र चिसोजन्य रोगव्याधिको प्रकोप देखिन सक्छ । दुर्घटना र सामाजिक अपराधका घटनाहरू फाटफुट घट्ने सम्भावना पनि देखिन्छ । सरकारी क्रियाकलाप सामान्य रहने छ भने महिनाको पूर्वार्द्धमा सेयर मार्केटको कारोबारमा तीव्रता देखिए पनि ११ गतेपछि मन्दी रहने सङ्केत छ ।
मार्गशीर्ष महिनाको मासिक राशिफल
यो महिना आठौं घरमा सूर्यको उपस्थिति रहेको हुँदा सकारात्मक समय छैन । अचानक विविध समस्या देखा पर्न सक्छन् । पारिवारिक र नातागोताभित्रका सदस्यहरूसँग राम्रो व्यवहार पुर्याउन नसक्नाले विनाकारण झगडा र विवाद हुनेछ । लामो समयसम्म अस्वस्थ हुने आशङ्का छ त्यसैले खानपान, आहारविहार र स्वास्थ्यप्रति सचेत रहनु बेस हुनेछ । तर राशिस्वामी मङ्गलको प्रभावले केही सकारात्मक फल प्राप्त हुनेछन् । सुखभोग गर्न पाइने छ । पेसागत र व्यवसायिक परिस्थतिमा सुधार आउने छ । धनसम्पत्ति लाभ हुने सम्भावना छ । बाधा हटाउन तथा शत्रुदमन गर्न प्रयास गरिने छन् । व्यापार वा नोकरी आदिमा उत्तरोत्तर प्रगति हुने राम्रो सम्भावना छ । यस महिनाको आगमनका साथ आठौं घरको शनि अढैया दशा समाप्त भएको छ । अब इच्छा र आकाङ्क्षा पूर्ण हुन थाल्नेछन् । मन निडर रहने छ र शत्रुगणले सामु पर्ने हिम्मत गर्दैनन् । सामाजिक सम्मान प्राप्त हुनेछ । सामान्यतया यस महिनाको ०२, ०३, ०४, १२, १३, १४, २१, २२ र २९ गते तपाईंका लागि अशुभ रहने छन् ।
शनिले राशि परिवर्तन गरेकाले यस महिनाबाट शनिश्चर ग्रहको अढैया महादशा प्रारम्भ भएको छ । दैनिकी सञ्चालनका क्रममा पनि समस्या हुनसक्छ । अनावश्यक आरोपका कारण सजाय भोग्नु पर्छ । सानातिना झंझट वा विवादबाट जोगिनु बेस हुनेछ । विपरीत लिङ्गीसँग पनि राम्रो सम्बन्ध हुनेछैन । सातौं भावमा रहने सूर्यको प्रभावले मानसिक रूपले तनावग्रस्त र अस्वस्थ हुने समय रहने छ । कडा मिहिनेत गर्दा पनि राम्रो परिणाम हात पार्न सकिने छैन । व्यवसायिक÷व्यापारिक क्षेत्रमा रहेका नजिकका साथीभाइ र कामदारले धोका दिनसक्छन् । उता राशिस्वामी शुक्र पनि छैटौं भावमा रहने हुँदा विपरीत लिङ्गीसँगको सम्बन्ध सुमधुर हुन सक्दैन । वासनाजन्य विचारले दुःखित तुल्याउने मात्र होइन, यसले अपमानित पनि बनाउन सक्छ । स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याका कारण दिनचर्र्यामा पनि अवरोध आउने छ । यद्यपि पेसागत र व्यवसायिक परिस्थति ठिकै रहने छ, तर कामको बोझ बढेको अनुभूति हुनेछ । खर्चको मात्रामा बृद्धि हुनेछ । सामान्यतया यस महिनाको ०५, ०६, ०७, १४, १५, १६, २३ र २४ गते तपाईंका लागि अशुभ रहने छन् ।
सामान्यतया यो महिना उपयोगी छ, जे गरे पनि सफलता हात पर्ने सम्भावना हुन्छ । पहिले देखिएका प्रायशः समस्याहरूको निराकरण हुनसक्छ । प्रतिस्पर्धीहरूमाथि विजय प्राप्त हुनेछ । नोकरी र व्यायसायिक जीवनमा सुधार आउने छ । प्रतिष्ठा र पदोन्नतिको सम्भावना छ । आफ्नो सर्कलमा सम्मान र साख मिल्नेछ । तर राशिस्वामी बुध ग्रह बक्री र अस्त हुने भएकाले खर्च नियन्त्रणभन्दा बाहिर हुनेछ । स्वास्थ्य सम्बन्धी कठिनाइ हुनसक्छ । शत्रु र प्रतिस्पर्धीले प्रतिष्ठा बिगार्ने प्रयास गर्नेछन् । बोलीलाई नियन्त्रण गर्नु राम्रो हुन्छ, कटुशब्दको प्रयोग र अर्काको आलोचना गर्ने प्रवृत्तिमा नियन्त्रण गर्नु राम्रो हुन्छ । बुद्धिस्थानको मालिक मानिएको शुक्र ग्रह स्वगृही भएकाले केही सकारात्मक फल पनि पाइने छ, सृजनात्मक क्षमताको प्रस्फुटन हुनाले कला, साहित्य, सङ्गीत आदि क्षेत्रमा प्रशंसा प्राप्त हुनसक्छ । सप्तम भावमा प्रवेश गर्ने शनिश्चरले पारिवारिक जीवनमा समस्या ल्याउन सक्छ सचेत हुनुपर्छ । सामान्यतया यस महिनाको ०७, ०८, ०९, १६, १७, १८, २५, २६, २७, गते तपाईंका लागि अशुभ रहने छन् ।
मनमा ठूलो उत्साह र उमङ्गको सिर्जना हुने समय प्रारम्भ भएको छ । आकस्मिक यात्राको अवसर आउन सक्छ । पाँचौं भावको सूर्य तथा तृतीय भावको पञ्चमेश मङ्गलको प्रभावले मनमा उत्साह र साहसी प्रवृत्ति देखा पर्नेछ । यात्राबाट लाभ मिल्नेछ । सञ्चार माध्यमबाट शुभ समाचार प्राप्त हुनेछ । नातागोता, खासगरी दाजुभाइका कारण खुसीको वातावरण सिर्जना हुनेछ । जग्गाजमिनसँग सम्बद्ध कारोबारबाट लाभ प्राप्त हुने सम्भावना छ । शत्रु र प्रतिस्पर्धीले सामना गर्न सक्दैनन् । गरिएका प्रयासमा सुनिश्चित सफलता प्राप्तिको योग छ । तर यस महिनाबाट आगामी केही वर्षसम्म पाँचौं भावमा शनिश्चरको उपस्थिति हुने भएकाले यसको प्रभावले सृजनात्मक क्षमतालाई प्रस्फुटन गर्न सक्नुहुन्न र बुद्धिविवेकको ह्रास हुनेछ । बढी आशावादी हुनु उचित होइन र यात्राबाट सोचे जस्तो लाभ प्राप्त हुन सक्दैन । आर्थिक समस्याले मानसिक तनावको सिर्जना हुनेछ । जोखिम ब्यहोर्नु पर्ने प्रवृत्तिलाई पूर्णरूपेण अङ्कुश लगाउनु बेस हुनेछ । सामान्यतया यस महिनाको ०१, ०२, १०, ११, १८, १९, २०, २७, २८ र २९ गते तपाईंका लागि अशुभ रहने छन् ।
हुन त यस महिनाबाट शनिको अढैया पूर्णतया समाप्त भएको छ, तर चौथो भावमा आउने सूर्यको प्रभावले यो समय कडा मिहिनेत र परिश्रम गर्ने समय हो । निरन्तर गरिएको कष्टप्रद परिश्रमका कारण छिटै थाकिन्छ र कार्य क्षमतामा समेत कमी आउने छ । मन कुकर्म र गलत आचरणतर्फ आकर्षित बन्न सक्छ । मातापिता र अभिभावक वर्गको स्वास्थ्यस्थिति चिन्ताको विषय बन्नेछ । उता नवमेश मङ्गल ग्रह दोस्रो भावमा रहेकाले अवाञ्छित व्यक्तिहरूउपर निर्भर रहनु पर्ने बाध्यता हुनसक्छ । आर्थिक दृष्टिकोणले पनि यो समय राम्रो होइन । व्यापारमा घाटा हुने वा धनमाल हराउने÷ चोरी हुने सङ्केत पनि छ । घरपरिवारकै सदस्यका बीचमा मनोमालिन्य बढ्नाले एवं ससाना कुरामा झैझगडा मानसिक तनाव बढ्नसक्छ । मुखलाई नियन्त्रणमा राख्नु बेस हुनेछ । उता व्यक्तिगत स्वास्थ्यप्रति समेत सचेतता अपनाउनु पर्ने देखिन्छ । बुध, बृहस्पति र शुक्रको अनुकूल फल पाइने छ । सामान्यतया यस महिनाको ०२, ०३, ०४, १२, १३, १४, २१, २२ र २९ गते तपाईंका लागि अशुभ रहने छन् ।
पारिवारिक जीवन सुखद रहनेछ । बहुप्रतीक्षित इच्छा, आकाङ्क्षा र उद्देश्य सफल हुनसक्छन् । अधिकतम समय घुमघाम र भ्रमणमा बित्नेछ, साथै ससाना यात्रा फलदायी र भाग्यशाली सिद्ध हुनेछन् । आकस्मिक रूपमा धनप्राप्तिको सम्भावना समेत छ । घरपरिवारका सदस्य, मित्र र नातागोता माझको सम्बन्ध सुदृढ हुनेछ । राशिस्वामी बुध तृतीय भावमा रहेकाले दाजुभाइ र दिदीबहिनीहरूबाट समेत सहायता मिल्नेछ । नयाँनयाँ व्यक्तिहरूसित सम्पर्क हुनाले भाग्य बढ्ने छ । पुराना साथीभाइसित भेटघाट हुनेछ । प्रकाशन वा एजेन्सीसम्बद्ध काम गर्नेले शुभ परिणाम प्राप्त गर्नेछन् । अभिव्यक्तिगत कलात्मकता एवं भावनात्मक अभिनयको सहज प्रतिभा देखा पर्नेछ । तर महिनाको पूर्वार्द्धमा राशिमा मङ्गल ग्रह बसेको तथा उत्तरार्द्धमा बुध बक्री हुने हुँदा इच्छाविपरीत परिणाम आउनसक्छ, त्यसैले फलप्राप्ति प्रति धेरै उत्साह नदेखाउनु उचित हुनेछ । जोखिमपूर्ण र जुवाजन्य काममा दिलचस्पी नदिनु नै बेस हुनेछ । पारिवारिक झमेला बढ्नाले मानसिक तनाव हुन सक्छ । सामान्यतया यस महिनाको ०५, ०६, ०७, १४, १५, १६, २३ र २४ गते तपाईंका लागि अशुभ रहने छन् ।
तपाईंको राशिमा रहेको साढेसाती शनिको महादशा समाप्त भएको छ । यस महिनाको अधिकतम समय राशिस्वामी शुक्रका साथमा दोस्रो भावमा सूर्यको उपस्थिति हुने भएकाले समग्रमा राम्रो समय छ । सुखद वातावरणमा सुखपूर्ण र आनन्दपूर्वक समय व्यतीत हुनेछ । दाम्पत्यसुख बढ्ने छ, साथीभाइ र मित्रवर्गले पनि साथ दिनेछन् । दाम्पत्य जीवनको भरपूर सुख भोग गर्न पाइने छ । थोरै मिहिनेत गर्दा पनि आयस्रोतलाई राम्ररी उकास्न सकिनेछ । ललितकला, सङ्गीत एवं साहित्यमा रूचि जाग्ने छ । व्यावसायिक कारोबारबाट लाभ मिल्नेछ । जोसुकैलाई पनि आफ्नो विचार र लक्ष्यप्रति सहमत तुल्याउन सकिने छ । तर सूर्यको प्रभावले शारीरिक तनाव र बोझलाई झेल्नसक्ने सामथ्र्य हुँदाहुँदै पनि पारिवारिक झैझमेला र समस्या बढ्नाले मन विचलित हुनसक्छ । दीर्घकालिक लगानी र कारोबारप्रति सचेत भए फाइदा लिन सकिने छ । पूर्वार्द्धमा धनस्थानमा नै बुध ग्रह भएकाले आर्थिक रूपले यो उत्तम बन्ने सङ्केत छ । सामान्यतया यस महिनाको ०७, ०८, ०९, १६, १७, १८, २५, २६ र २७ गते तपाईंका लागि अशुभ रहने छन् ।
मंसिर महिनाभरि तपाईंकै राशिमा सूर्यको उपस्थिति रहने छ, धनसम्पत्ति र सुखसुविधा आर्जन गर्ने पक्षमा आकर्षित रहनुहुनेछ । आवश्यकताभन्दा बढी आत्मविश्वासको सिर्जना हुनेछ । सार्वजनिक क्षेत्र अथवा सरकारको कुनै महत्त्वपूर्ण जिम्मेबारी प्राप्त हुनसक्छ । छोटो दूरीको यात्रा हुने सम्भावना छ, जुन सुझबुझ र लगनशीलताका कारण फलदायक सिद्ध हुनेछ । सामाजिक सङ्घसंस्था वा परोपकारका क्षेत्रमा सहयोग गर्नु पर्नेछ । राशिस्वामी मङ्गल राज्यस्थानमा रहेकाले मित्र र सहयोगीहरूबाट लाभ मिल्नेछ । बहुप्रतीक्षित इच्छा र आकाङ्क्षाले पूर्णता पाउने छन् र लामो दूरीको यात्रा लाभदायक रहने छ । आय आर्जनका मार्गमा बढोत्तरी हुनेछ । बाह्रौं भावमा रहेको बृहस्पति र शुक्रका कारण विलासिताका सामग्री र अन्य वस्तुहरू खरिद गर्नाले खर्च बढ्न सक्छ, तर घरायसी र पारिवारिक वातावरण सुखद हुनेछ । उता राशिमा नै रहेको बुध ग्रहका कारण प्रतिभा, दक्षता र योग्यता प्रदर्शन गर्नाले राम्रो परिणाम प्राप्त हुनेछ । महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व र विद्वानहरू सम्पर्कमा रहनेछन् । सामान्यतया यस महिनाको ०१, ०२, १०, ११, १८, १९, २०, २७, २८ र २९ गते तपाईंका लागि अशुभ रहने छन् ।
तपाईंको राशिको बाह्रौं भावमा सूर्यको प्रवेश भएकाले यो महिनाभरि क्षणिक आवेग र उन्मादलाई नियन्त्रण गर्नु बेस हुनेछ । गलत निर्णयका कारण अकल्पनीय हानि हुनसक्छ, त्यसैले कुनै निर्णय लिनुपूर्व राम्रो सोचविचार गर्नु आवश्यक छ । खर्चको मात्रा बढ्ने छ । व्यवसायिक स्थितिमा गिरावट आउनसक्छ । व्यक्तिगत स्वास्थ्य पनि अनुकूल हुनेछैन । नातागोताका सदस्य एवं मित्रवर्गसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम राख्नु आवश्यक छ, अन्यथा एकआपसमा तनाव उत्पन्न हुनसक्छ । जुवातास, लटरी र सट्टापट्टातर्फ नहौसिनु ठिक हुनेछ । तर राशिस्वामी बृहस्पति राज्यस्थानमा र पञ्चमेश मङ्गल कर्म क्षेत्रमा रहेकाले लेनदेनको कारोबार, सार्वजनिक क्षेत्र वा सरकारी कामका माध्यमबाट फाइदा हुनेछ । उच्च पदस्थ र महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूसित मित्रता हुनेछ, जसबाट लाभान्वित बन्नुहुनेछ । व्यवसायिक क्षेत्र र व्यापारको विस्तार हुनेछ । विपरीत परिस्थितिलार्ई कुशलतापूर्वक झेल्नाले आत्मविश्वास बढ्नेछ । शत्रुले हानि पुर्याउन सक्दैनन् । महिनाको उत्तरार्द्धमा राशिमा बुध ग्रहको प्रवेश भएपछि केही सकारात्मक फलहरू प्राप्त हुन थाल्नेछन् । सामान्यतया यस महिनाको ०२, ०३, ०४, १२, १३, १४, २१, २२ र २९ गते तपाईंका लागि अशुभ रहने छन् ।
राज्यस्थानमा सूर्य र भाग्येश बुधको उपस्थिति हुने भएकाले इच्छा र आकाङ्क्षा पूर्ण हुने समयका रूपमा यस महिनाको आगमन भएको छ । आय आर्जनका मार्गमा सुधार आउने छ । लामो यात्रा सुखद र सफल हुनेछ । व्यापार÷व्यवसायलाई बढाउने र चम्काउने अवसर मिल्नेछ । पञ्चमेश शुक्रको बृहस्पतिका साथमा कर्मक्षेत्रमा उपस्थिति भएकाले कार्य क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण सफलता मिल्नेछ । तर राशिस्वामी शनिश्चर बाह्रौं भावमा आएर साढेसातीको शनि दशाको प्रारम्भ भएको छ । यसको प्रभावले आगामी केही वर्ष खर्चबर्चको मात्रामा बृद्धि हुने देखिन्छ । परदेशको यात्रा हुने वा कर्मचारीले नचाहेको क्षेत्रमा सरुवा हुने परिस्थिति बन्नेछ । सहयोगी र मित्रवर्गसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम हुन सक्दैन । दैनिकी सञ्चालनका क्रममा अवरोध सिर्जना हुनेछ । घरपरिवारका सदस्यहरूको व्यवहार अनुकूल हुन सक्दैन । मुद्दामामिला र कानूनीफन्दामा फँस्ने सम्भावना हुन्छ । आफ्नो कुण्डलीको शनिको परिस्थिति हेरी शनि ग्रहको स्वस्तिशान्ति र जाप गराउनु राम्रो हुनेछ । सामान्यतया यस महिनाको ०५, ०६, ०७, १४, १५, १६, २३ र २४ गते तपाईंका लागि अशुभ रहने छन् ।
यस महिनाबाट राज्यस्थानमा राशिस्वामी शनिको उपस्थिति भएको छ । त्यस्तै महिनाभरि कर्मक्षेत्रमा सूर्यको प्रभाव रहने छ । त्यसैले यस अवधिमा अत्यन्त क्रियाशील र व्यस्त रहने सम्भावना देखिन्छ । व्यापार र नोकरीका माध्यमबाट लाभ मिल्नेछ । हाकिम, मातापिता र वरिष्ठ व्यक्तित्वको सहानुभूति र आशीर्वाद मिल्नेछ । व्यवसायिक÷व्यापारिक दृष्टिले फलदायी यात्राको सम्भावना छ । पञ्चमेश बुधको दसौं घरमा उपस्थिति रहेकाले वरिष्ठ व्यक्तित्व वा सत्तावान् व्यक्तिका साथको सम्बन्धमा सुधार आउने छ । पारिवारिक वातावरण संतोषप्रद रहनेछ । वाहनादि खरिद गर्ने र विदेशबाट लाभ प्राप्त हुनेछ । घरमा कुनै शुभ कृत्यको आयोजना हुनसक्छ । भाग्येश शुक्रको प्रभावले उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूबाट सम्मान प्राप्त हुनेछ र तिनको सहयोग र सद्भाव प्राप्त हुनेछ । मातापिता र गुरूजनसित अति सुमधुर सम्बन्ध कायम हुनेछ । सुदूर र दुर्गम प्रदेशको भ्रमण हुनसक्छ । थोरै मात्र प्रयास गरेर आम्दानीका मार्ग बढाउन सकिन्छ । सामान्यतया यस महिनाको ०७, ०८, ०९, १६, १७, १८, २५, २६, २७, गते तपाईंका लागि अशुभ रहने छन् ।
मंसिर महिनाभरि भाग्यस्थानमा रहने सूर्यको केही सकारात्मक र नकारात्मक गरी मिश्रित प्रभाव प्राप्त हुनेछ । उच्च पदमा प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूसित भेटघाट हुने तथा सल्लाह र सद्भाव प्राप्त हुने सम्भावना छ । मातापिता र अभिभावकवर्गको स्वास्थ्यस्थिति चिन्ताको विषय बन्नसक्छ । धार्मिक र सांस्कृतिक महत्त्वको क्षेत्रमा भ्रमण हुनेछ । विश्वासको वातावरण बन्नाले व्यावसायिक एवं रोजगारीका क्षेत्रमा सफलता आर्जन हुनेछ । धनार्जनका दृष्टिले समेत राम्रो छ । भाग्येश मङ्गल सातौं भावमा रहेकाले दैनिक कामकाज र व्यवहारमा अनेकानेक कठिनाइको सामना गर्नुपर्छ । शत्रुले छवि बिगार्ने प्रयास गर्नेछन् । सहयोगी र साझेदारहरूसँग विवाद हुने सम्भावना छ । पारिवारिक जीवन सुखद हुनेछैन । स्वास्थ्यप्रति समेत सचेत हुनु राम्रो हुन्छ । तर भाग्यमा रहेको बुध र शुक्रको प्रभावले प्रसिद्ध व्यक्तिहरू सम्पर्कमा आउने छन् । ख्याति, प्रतिष्ठा र सम्मानमा बढोत्तरी हुनेछ । व्यवसाय वा पेसामा राम्रो उपलब्धी हासिल हुनेछ । सामान्यतया यस महिनाको ०१, ०२, १०, ११, १८, १९, २०, २७, २८ र २९ गते तपाईंका लागि अशुभ रहने छन् ।